ချစ်ကြည်အေး: သီတင်းကျွတ်ကျွတ် မကျွတ်ကျွတ်
ZT Sun Oct 24, 10:56:00 PM GMT+8
အင်း။ သီတင်းကျွတ်ပြန်ပြီ။ :D
Anonymous Sun Oct 24, 11:27:00 PM GMT+8
ကျွတ်ပြန်ပြီ သီတင်း. . အင်း။
Anonymous Sun Oct 24, 11:29:00 PM GMT+8
အခုတော့ အစာမကြေတဲ့သူတွေ ရင်မချောင်တဲ့သူတွေအတွက် သူတို့ရင်ချောင်အောင်နားထောင်ပေးနေတယ်ဗျိုး....သူငယ်ချင်းတွေ၊ အမတွေ က သူတို့ကျ ယူပြီး အနော်တို့ကျတော့ မယူနဲ့တဲ့ မကောင်းဘူးတဲ့ ဟုတ်လားအမချစ် အမချစ်တို့ကိုဘဲမေးမြန်းရမှာဘဲ
ရွှေရတုမှတ်တမ်း Mon Oct 25, 12:47:00 AM GMT+8
အန်တီချစ်တို့လို လူကြီးတွေက သားသားကျောက်တို့လို အချစ်ရေးနားမလည်သူတွေ အတွက် ရှာဖွေ စပ်ဟပ်ပေးသင့်တာပေါ့..ဂျာ...
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Mon Oct 25, 12:55:00 AM GMT+8
သီတင်းကျွတ်ပြီလို့ လာပြောတဲ့သူ ရန်သူဘဲ။
ကိုဇော် Mon Oct 25, 01:19:00 AM GMT+8
အများပျော်မဲ့ နှစ်ပါးဖော် ထဲက
ထွန်းထွန်း လိုမျိူး စိတ်ကောက်ပြသွားတယ်။
လူပျိုကြီး ဆိုတာ နာမည်သာ ဆိုးတာ ကျန်တာ မကောင်းဘူး :P
အနမ်း Mon Oct 25, 01:28:00 AM GMT+8
ငယ်ငယ်ကသီတင်းကျွတ်ကိုပဲသတိရရင်း.. သီတင်းကျွတ်ပေါင်းများစွာကို ဖြတ်ကျော်နေတယ်း)))
ကျွတ်ကျွတ် မကျွတ်ကျွတ်ပေါ့နော် ..းP
မေဓာဝီ Mon Oct 25, 06:24:00 AM GMT+8
မကျွတ်မယ့်သူတွေကတော့ သိကြားမင်း နားကင်းကြီးနဲ့ ဆင်းချွတ်တောင် ကျွတ်ဖူး ... တဲ့။ ဟီးးးးး
သီတင်းပဲကျွတ်ကျွတ် တန်ဆောင်ပဲမုန်းမုန်း ...
ငှက်ပျောတုံးသာ ဖက်အိပ်ပါတော့မည်တကား ....
သာဓု သာဓု သာဓု ........ :D
အဖြူရောင်နတ်သမီး Mon Oct 25, 07:05:00 AM GMT+8
ဂျစ်တူး ( မုံရွာ ) Mon Oct 25, 07:54:00 AM GMT+8
ဂျစ်တူး ( မုံရွာ ) Mon Oct 25, 07:56:00 AM GMT+8
sv Mon Oct 25, 08:11:00 AM GMT+8
သီတင်းကျွတ်ဆိုတာ တနှစ်တခါ အမြဲကျရောက်နေမယ့် သင်္ကြန်လိုမျိုး ရိုးရာပွဲတော်( ဘာသာရေးပွဲ )လေးပါ....သီတင်းကျွတ်တော့ ဘာဖြစ်လဲ ..ကန်တော့ရင် မုန်.ဖိုးရတယ်လေ...ခုတော့ မရတာ ၃ နှစ်လောက်ရှိပါရောလား....ဆီမီးတွေ နဲ. ထိန်နေတဲ့ဘုရားစေတီ...နာမည်ကြီးတဲ့ ဦးဘဂျမ်းကာတွန်း...လိုက်ကန်တော့ရင် မုန်.ဖိုးပြန်ပေးတတ်တဲ့ အမျိုးတွေ လွမ်းလိုက်တာ....
Ko Paw Mon Oct 25, 08:20:00 AM GMT+8
ဟားဟား... ရယ်ရတယ်။ အဲ..အဲ... မရယ်ရဲဘူး။ တော်ကြာ အသိအပျိုကြီး၊ လူပျိုကြီးတွေနဲ့ လမ်းမှာတိုးရင် ကိုယ့်ကို မျက်နှာကြော တင်းပြနေပါဦးမယ်။
ညီမလေး Mon Oct 25, 09:16:00 AM GMT+8
ဟဟဟာားးး စောစောစီးစီး အားရပါးရရယ်လိုက်ရတယ် ချစ်ချစ် ... ရှဲ့ရှဲ့
အင်းးး လူတကိုယ် အကြောင်းတမျိုးစီပေါ့ .. တွေးခေါ်မှုလဲ တမျိုးစီပေါ့..ယောကျာ်းဟာ ယူတာ နဲ့ မယူတာ ၂မျိုးသာ ရှိတယ် ။ ယူချင်လဲယူ မယူချင်လဲနေ ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ရွေးထားတဲ့ တမျိုးကို ကျေကျေနပ်နပ် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြစ်နေဖို့သာ အရေးကြီးတယ်တဲ့ ..ညီမလေးအကိုပြောတာ ။
အဲ့အဆိုကို ထောက်ခံရင် မဲပေးပါး)
အင်ကြင်းသန့် Mon Oct 25, 09:29:00 AM GMT+8
သြော်....လတ်စသတ်တော့ ဒီပိုစ့်က လူကြီးတွေအတွက်ပဲ။ ဂျင်းစုတ်တို့လို ကလေးတွေနဲ့မဆိုင်သေးဘူး။ ညှင်းညှင်း....
Nyo Mon Oct 25, 11:06:00 AM GMT+8
Ma Chit, I've seen you and some of your friends in C Hall (as Kyaw Hein is known by audience) that might be included some of lovely eight spinsters.
I guess No.1 category in your list is not quite true.D!
Vista Mon Oct 25, 11:39:00 AM GMT+8
အပျိဂျီးများ ဝိုင်းနေသောကြောင့် ဘာမှ မပြောသွားဘာကြောင်း :P
Nyo Mon Oct 25, 11:40:00 AM GMT+8
Let us see the pictures of lovely eight spinsters for witness of category one.
Thanks for joyful post !
:P Mon Oct 25, 12:25:00 PM GMT+8
♫ ♫ သူ သီတင်းကျွတ်ကျွတ်.. ♫ ♫မကျွတ်ကျွတ်ပေါ့.... ~~ ♫ ♫ ♫ ♫
♫ ♫ ကျနော်ကတော့ ကျွတ် မရသေးပါဘူး... ♫ ♫
♫ ♫ တစ်လောကလုံးက ပြောနေပြီ ကိုယ့်ကိုလေ...♫ ♫
♫ မခံချင်ဘူး .. ကိုယ်ဘယ်လို ယူပြရမှာလဲ.....♫ ♫
♫ ♫ အချစ်ကလေးရယ်...... ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
Anonymous Mon Oct 25, 02:11:00 PM GMT+8
အင်း ချစ်ကြည်အေး ရေ
ဒို့မှာလည်း အကုန်ပြည့်စုံတဲ့ အပျိုကြီးဘော်ဘော်တွေ ရှိတယ် ဖူးစာပေါ့နော် တချို့ကလည်း မယူချင်ကြဘူးတဲ့
အမယ်လေး တော်သေးတယ် ရွှေစင်ဦး လည်း ချစ်ချစ်ကြီး ကယ်လို့ နိုမို့ ဆိုရင် သီတင်းကျွတ်တိုင်း ငိုနေရအုန်းမယ်
T T Sweet Mon Oct 25, 02:11:00 PM GMT+8
ရယ်ရတယ် ... ရေးထားတာ။
" သူသည် နွားနိူ့ သောက်ချင်တာနဲ့ နိူ့စားနွားမကြီး တကောင်လုံး မွေးစရာ မလို၊ လက်လီ ဝယ်သောက်မည် ဆိုသူတည်း။"
ဟမ် ... နွားမက နွားနို့တစ်ခုထဲ ညှစ်လို့ရတာမှ
မဟုတ်တာ ... လယ်ထွန်တာတို့ ... လှည်းမောင်းတာတို့လဲ လုပ်လို့ရသေးတာကို နော့ ... သူ့ပြောရတာနဲ့ ကိုယ်တောင် ဘာဖြစ်သွားလဲသိဘူး ဟီး.. ဟီးး)))
မောင်မိုး Mon Oct 25, 02:29:00 PM GMT+8
သားသားတို့ကတော့ နောက်တခေါက်တောင် ကျွတ်လိုက်ချင်သေးးအဟေးးးဟေးးး
Crystal Mon Oct 25, 03:00:00 PM GMT+8
သီတင်းကျွတ်ရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာလို့ ပွဲလမ်းသဘင်တွေသွားပြီ မပျော်ရပေမယ့် အစ်မချစ်ရဲ့ ပိုစ့်လေးကြောင့် ပြုံးပျော်လို့ သွားရပါကြောင်း။
ဆောင်း Mon Oct 25, 03:45:00 PM GMT+8
simple views ရေ ၁၃လမ်းက တန်ဆောင်တိုင်ဘဲ စည်တာမဟုတ်လား။ ကာတွန်းတွေကို မီးပုံးလေးလို ချိတ်ဆွဲတာ ၁၃လမ်းတန်ဆောင်တိုင်လေ။
အဖြူရောင်နတ်သမီး Mon Oct 25, 05:37:00 PM GMT+8
ဟိုနေ့က မန့်ပြီးမှ စာလုံးပေါင်းမှားလို့ ဖျက်ပြီး ထပ်မန့်လို့မရတော့လို့..အခုမှ ပြန်လာမန့်ပါတယ်...
အပျိုကြီးစာရင်းဝင် တယောက်မို့ “မကျွတ်ချင်သေးလို့”...လို့ ပြောရင်ကောင်းမလား...
နတ်သမီးကတော့ နောက်နှစ်ဆိုရင် ချွတ်ပြီ...အဲ..ကျွတ်ပြီပဲ...
အဖြူရောင်နတ်သမီး Mon Oct 25, 05:38:00 PM GMT+8
အဲဒီလို ပေါက်ကရတွေ ရေးတော့ နက်က ကောင်းမှကောင်း..
သိင်္ဂါကျော် Mon Oct 25, 06:15:00 PM GMT+8
ဘာလို့ အပျိုကြီး ဖြစ်ကြသလဲ.. အဖြေလည်း မပါပါလား..
သူများတွေက မေးကြတယ်.. ကိုယ့်မှာလည်း အဖြေမရှိဘူး.. :D
ချိုကျ Mon Oct 25, 07:42:00 PM GMT+8
အမချစ်.....အပျိုကြီး ၈ယောက်အကြောင်းအား အနှီလူပျိုလေး လာဖတ်မှတ်လေ့လာ သွားပါကြောင်း :) ခွိ
Rita Mon Oct 25, 08:43:00 PM GMT+8
ဖေဖော်ဝါရီ ရောက် ရောက်မှန်း။
နိုင်ငံခြားရောက်မှ ဗမာလတွေ မသိတော့တာ။
ဇွန်မိုးစက် Mon Oct 25, 09:05:00 PM GMT+8
ကျွတ်သွားပြန်ပြီ... သီတင်း :P
တို့နဲ့ မဆိုင်သေးဘူးကွယ် (မျက်လုံးကလေး မှေးစင်း၍ ခေါင်းလေးအသာအယာခါကာ ပြောသွား)
ကလူသစ် Mon Oct 25, 09:16:00 PM GMT+8
အဲ့ဒီအပျိုကြီးတွေနဲ့ အဲ့ဒီလူပျိုကြီးတွေ ပေးစားလိုက်ပြီးတာပဲ ဟာကို
Sandakuu Mon Oct 25, 10:58:00 PM GMT+8
လူဆိုတာ ကိုယ့်အားနည်းချက်ကိုယ်စီရှိတယ်လို့တော့ထင်တယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ပျော်ရွှင်မှုအတွက် စချင်နောက်ချင်တိုင်း သူများအားနည်း ချက်ထိခိုက်မယ့်ဟာမျိုးတော့ အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ပါတယ်။ ချစ်သူရှိရက် နဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်လက်မထပ်နိုင်သေးတဲ့ အမကြီးတွေ အကိုကြီးတွေ၊ ရှိသလို အိမ်ထောင်ရှိရက် အထီးကျန်နေတဲ့ အိမ်ထောင်သည်တွေ နဲ့ လင်/မယား ရှိလျက် ခေါင်းအုံးဖက်အိပ်နေရသူတွေလဲအများကြီးရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခင်မင်လို့ဖြစ်ဖြစ် ရင်းနှီးလို့ဘဲဖြစ်ဖြစ် သူများအားနည်းချက် ကို သွားမဆွမိ အောင်သတိထားပါတယ်။
သူတို့အားနည်းချက်ကို ကိုယ်သွားဆွမိရင်တော့ ပြန်ကန်ထွက်လာမယ့်စကားတွေကိုလည်း ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးရမှာပါ။
ကူးအမြင်ကိုပြောပြတာပါ။ အကယ်လို့ မှားနေရင် ကိုယ့်အမြင်နဲ့ကိုယ်မို့ အားလုံးက မှန်ပါတယ်နော်။း)
ZZZ Tue Oct 26, 03:26:00 PM GMT+8
ဖတ်လို.ကောင်းတယ်ဗျို. ၊ တစ်ခါမှ မကြာဖူးဘူး ၊ ဗဟုသုတရပါတယ်
မဆွိရဲ့ ကွန်မန်.ကိုဖတ်ပြီး ရယ်လိုက်ရတာ ....
မြသွေးနီ Tue Oct 26, 04:52:00 PM GMT+8
ကိုးနတ်ရှင်နှိပ်စက်လို့ သီတင်းကျွတ်မှာ လိုင်းပေါ်တက်မရဖြစ်နေခဲ့တယ်။
မြသွေးတို့ကတော့ သီတင်းမှကျွတ်တာရက်ပိုင်းရှိသေး မင်္ဂလာဆောင်(၃)ပွဲ သွားရောက် ချီးမြှင့်ခဲ့ရပြီးပြီ။ ကိုယ်ကသွားကန်တော့တာရော...ကိုယ့်ကို လာကန်တော့သမျှပေးရတဲ့မုန့်ဖိုး...ဒီလကတော့ မြသွေးနီ တကယ် ကျွတ်တဲ့လ။ ဘ၀ဆိုတာ ကားမောင်းသလို ဘက်ဂီယာလည်း ထိုးမရလေ တော့.....။ ဆက်လက်လို့ သီတင်းကျွတ်ပေါင်းများစွာကို သူ့လက်ကိုဆွဲလို့ အံကြိတ်လို့ ကျော်ဖြတ်ရပေဦးမည်။
Anonymous Tue Oct 26, 06:21:00 PM GMT+8
Have seen APG/LPG especially eldest daughter/son, who took the big share of resposibility in raising the family, missed the opportunity to meet their counterparts due to family burden. When the burden lessen, they are already old enough that people will ridicule if they then look for partners, especially for burmese women. What is worse is that younger siblings and their kids may later view this APG/LPG as burden.
Anonymous Tue Oct 26, 06:47:00 PM GMT+8
မိဘတွေကို ရှာကျွေးရင်း၊ အငယ်တွေကို တာဝန်ယူရင်း အပျိုကြီးလူပျိုကြီး ဖြစ်ရတာက ကံဆိုးရင် ကိုယ့်အောက်က အငယ်တွေက တစ်ချိန်ကျ ပြန်စော်ကားရောဗျ။
ခါတိုင်း ဟိုဟာလိုတယ် ဒီဟာလိုတယ် လက်ဝါးဖြန့်ဖြန့်နေကျ ညီညီမတွေက ကျွန်တော် စီးပွားကျတုန်းက မျက်နှာရှစ်ခေါက်ချိုးနဲ့။ လမ်းတွေ့တောင် မမြင်ချင်ယောင် ဆောင်သွားတယ်။ စီးပွားပြန်တက်တော့ အိမ်မှာ လာနေပါရစေတဲ့။ ခပ်ပြောင်ပြောင်ပဲ။ သူတို့ ပိုက်ဆံလိုတယ်တဲ့။ အရှက်မရှိဘူး။
ညီညီမဆိုတဲ့ ဒီကျေးဇူးကန်းတွေ ခုဆို အိမ်ရိပ်တောင် အနင်းမခံဘူး။
မောင်လေး Tue Oct 26, 09:28:00 PM GMT+8
သွေးမကြီးဘူး အစ်မရေ..မကြီးဘူးဗျ...။တိုက်တွန်းရုံတင်မဟုတ်၊ရှာဖွေ ပေးလို့
ပါရသေး...။နွားမကြီးလည်းမဝယ်နိုင်၊လက်လီလည်း ဝယ်မသောက်နိုင် ဖြစ်နေ
မြစ်ကျိုးအင်း Wed Oct 27, 04:39:00 PM GMT+8
သီတင်းကျွတ်လို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့ အထဲမှာ ကျနော်လည်းပါတယ်ဗျ။
ကိုယ်မှ အဖြစ်မရှိတာကိုးး)
လင်းဒီပ Wed Oct 27, 10:05:00 PM GMT+8
Anonymous Wed Dec 08, 09:18:00 AM GMT+8
aung moore Sat Sep 22, 04:27:00 AM GMT+8